﻿Download Windows 8 Ngwungwu Ihu Asụsụ (LIP) from Official Microsoft Download Center
Ngwungwu Ihu Asụsụ nke Windows (LIP) na-enye ụdị nke atụgharịrị obere maka mpaghara nke Windows a na-ejikarị. Ka ị wụnyechara LIP ahụ, a ga-egosi ederede dị na ọkachamara, igbe ụbụbọ, menu, na isiokwu Enyemaka na Nkwado na asụsụ LIP. Ederede nke atụgharịrị ga-adị n’okpuru asụsụ nke Windows 8. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị zụtara ụdị nke Windows 8 dị na Spanish, wee rụnye Catalan LIP, ụfọdụ ederede ga adị na Spanish. Ị nwere ike ịrụnye karịa otu LIP n'otu nyiwe asụsụ. Enwere ike ịrụnye Windows LIP n'ụdị Windows 8 niile.
Mee otu n'ime ihe ndị a: